အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ရံပုံငွေ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:40 PM
ခွန်အား၊ ချွေးတွေနဲ့ ပြည်သူ့အသက်တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို မမေ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါသည်။
သာဓု၃ လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောင်လဲ ဒီထက်မက ပိုလှူနိုင်ပါစေ။
အရမ်းအားကျသွားပြီ ငါ့ညီရေ.. ကျိတ်လိုက်ကွ..
မွန်မြတ်တဲ့ စေတနာနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်မို့လို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အစ်ကိုပါလို့ ထင်တယ် ၃ ဂိ်ုးပြတ်နိုင်တယ်း) ဂွဒ်တယ် ဂွဒ်တယ် လေးလည်း လေးစားတယ် ၃ ပုံမြောက်က အစ်ကိုကိုင်ထားတဲ့ ၀ါဝါထိန်ထိန်လေးက ရောင်းစားလို့ ရလားဗျ အစစ်ဆို ပွတာပဲနော့် ဟားဟား ။
2 teams ne trophy ya tal naw :P I'm proud of your dedication. Hope to see more in the future too. Keep up with great heart and works. :) :) :)
ဟိုနေ့က ကိုကျန်စစ် chatting box မှာ နိူင်တဲ့ သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ငါလည်း သူစာကျက်ပျက်မှာ စိုးလို့ chat oင်ပြီး မမေးလိုက်တာကွ။ တို့ချစ်တဲ့ နိူင်ငံတော်ကြီးက ဒုက္ခ မျိုးစုံ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အပြောနဲ့မဟုတ် လက်တွေ့မျက်တွေ့ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားပြီး ရလာတဲ့ သန့်စင်တဲ့ငွေကို နင်းပြားတွေဆီ အရောက်ပို့မယ်ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ကွာ။ ညီအကိုတွေ အားလုံး နှလုံးပီတိ ဂွမ်းဆီထိ အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ ဒုတိကမြောက် သွားပြီဆိုတော့ ဒုတိယအကြိမ် သာဓုခေါ်တယ်ကွာ။
ကောင်းလေစွ.... ကောင်းလေစွ... ကောင်းလေစွ
congrat ပါအကိုရေ...အကြံလေးကောင်းတယ် ...:D
Congrats Bros !
သာဓု သာဓု သာဓု ဒီလိုကုသိုလ်ပြု လှူဒန်းခြင်းအားကြောင့် နောင်ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ နာမည်ကြီး၊ ၀င်ငွေအဘက်ဘက်က ကောင်းတဲ့ ဘောလုံးသမားဖြစ်ပါစေဗျား ........... :P
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွဲ ဆင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းမဟုတ်လို့ တက်နိုင်တဲ့ဘက်က
ကူညီခွင့်ရခဲ့တာကိုပဲ ကျေနပ်မိပါတယ် .. နိုင်ငံအတွက် နာမည်ကောင်းရအောင် အနိုင်ကန်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ ..အားလုံးကိုပေါ့
နေ့လည်တည်းက လာဖတ်ပြီးတာဟ .. ဒီတစ်ခါရော ကူးပြီး ငါ့ဘလော့မှာ တင်ရဦးမလား။ တော်တော် Q တာပဲကွ. LOL
ပွဲကခြေမမျှတော့ ကန်ရတာတောင် သနားတယ်ကွာ. ကျွတ်ကျွတ်. ဒူးတော့ပြဲသွားတယ်။ ဟီး.
ကျေးဇူးညီရေ..တစ်ကူးတစ်က အကြောင်းကြားပေးလို့...:) အမှန်ပြောရရင် ပွဲပြီးတဲ့ နေ့ကတည်းက ကိုယ် . လာကြည့်နေတာ :) ပြန်ကြည့်ပြီး ကုသိုလ်ပွားချင်လို့..
တစ်သင်းလုံးကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်ညီရေ...အသေအချာ ကြိုးစားခဲ့ကြလို့..
ပုံတွေအားလုံး ယူသွားပြီ. :)
good job! ဆက်ကြိုးစားမောင်လေးရေ...အားပေးနေတယ်။ (home!)
ဘလက်ကြီးရေ ငါတို့လူကိုယ်တိုင်လာအားမပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ မင်းတို့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းညီအကိုတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ နောက်ထပ်နောက်ထပ် တို့တတ်နိုင်တာတွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြမယ်ကွာ။ ပျော်ရွှင်ပါစေသူငယ်ချင်းရေ.. :) စာမေးပွဲတွေလဲ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ :) :)
SALUTE TO ALL OF YOU GUYS!!!!
SUCH GREAT EFFORTS TO MAKE IT HAPPENED THIS CHARITABLE WORK....
MANY CONGRATULATION ON WINNING THE TROPHY AS WELL......
YOU HAVE CHARISMA & I'M SO PROUD OF YOU..
ငါ့ချစ်နယ်က ဘာတွေဝင်လုပ်နေတာလဲ ဘလက်ကြီးရ ..
ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူတွေ ချည်းပဲ ဟတ် ဟတ် မိုက်တယ်
မွန်မြတ်တဲ့ စေတနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့သူ အားလုံးကို လေးစား ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ၃ဂိုး ဂိုးမရှိဆိုလို့လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။း)
မောင်မျိုးရေ ရောင်းလို့တော့ မရဘူး ၊ ပဲနို့ရည်နဲ့ လဲမယ်လေ:P ၊ ချစ်နယ်ရေ ငါလဲ ၀င်ကြိတ်လိုက်တယ်လေ ၊ ငါသွင်းတဲ့ဂိုးဝင်ရင် ၄ ဂိုးပြတ်တယ်:P ၊ ဘလက်ရေ ကျေးဇူးဗျို့ ကွန်မန့်တာနောက်ကျလို့ ခွင့်လွတ်ဗျ ၊ စာမေးပွဲတွေ အားလုံး အိုကေ ပါစေ :D
ကောင်းတယ်ဗျို့ ... ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာ့ခြေကိုလည်းပြရင်း ရန်ပုံငွေ ရှာနိုင်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို လေးစားသွားပြီဗျို့ :)
ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်မိပါတယ်..။ သိတာတောင် နောက်ကျသွားတယ်။
ဝေး ... ဂုဏ်ယူတယ် ... ချီးကျူးတယ် .. တကယ့် အမှတ်တရပဲ ...။ တော်တယ် ... လေးစားတယ်...။
uh. bookmarked thoughts :))